Siduu u Apacer Pen Drive Recovery
> Resource > Ladnaansho > Siduu u Apacer Pen Drive Recovery
Apacer Pen Drive Data Recovery dhibaatada, Fadlan caawi!
My dhibaato waa mid fudud laakiin muhiim ah. Qaar ka mid ah filimada ayaa tirtiray ka Apacer HN212 Steno anfacaya qalinka drive si lama filaan ah. Su'aashu waxay tahay in sida aan dib ka qalin Apacer in la wado filimada aan tirtiray heli karaa? Waxaan sugaya xal. Thanks.
Indeed, filimada aanay si dhab ah u tirtiray ka qalin drive Apacer. Waxay geli yihiin laakiin weli waa ay gudaha qalinka drive Apacer, shuruud ah in aad waxba kama qaban wixii macluumaad cusub qalabka. Movies Your tirtiray baabi'i doontaa si joogto ah oo keliya marka ay overwritten by xog cusub.
Ogaanshaha runta khasaaraha xogta, aad haatan ka tagi karo qalinka drive Apacer keliya oo raadi ah Apacer drive qalinka qalab soo kabashada. Nasiib wanaag waxaa jira barnaamij ku haboon oo waxtar leh oo aad loogu: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani utility awood badan u keeneysaa inuu ka soo kabsado files ka Apacer qalinka drive, iyadoo aan loo eegayn waxa ay guul darro sababtoo ah tirtirka, formatting ama xitaa baadi nidaamka. Waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan faylasha sida sawiro, videos, files audio, document files, iwm ka qalin drive Apacer.
Download version maxkamad la xaawilayo in xogta laga Apacer qalinka drive hadda ah.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga Apacer Pen Drive
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow Apacer Pen Drive Data Recovery
Ku rakib Wondershare Data Recovery on your computer oo abuurtaan, waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida hoos ku image muujinaya, taas oo aad bixisaa 3 hababka soo kabashada.
Si aad u soo kabsado lumay, la tirtiro ama formatted xogta, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 baarista Apacer Pen Drive u Khasaaray Files
Waxaad dooran kartaa warqad drive ee qalinka drive Apacer oo guji "Start Scan" si ay u bilaabaan u baar.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad qalin drive Apacer waxaa laga garan karaa sida disk adag on your computer.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga Apacer Pen Drive
Scan ka dib, faylasha helay on qalinka drive Apacer doonaa oo dhan lagu qori uu furmo. Hadda waxaad arki kartaa magacyada file helay si uu u hubiyo in faylasha aad doonaysid in aad dib u hanato la ogaan ama aan.
Markaas sax ah oo ku saabsan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" si ay u soo celiyaan.
Waxaa looga baahan doonaa in aad xulan meel si ay u dhawrto xogta soo kabsaday. Fadlan dooro gal on your computer ama qalab kale oo lagu kaydiyo si ay u badbaadin.
Habka ugu fudud ee Soo Celinta kaabta Kies in macruufka 9
Sida loo Barzakh drive adag in Windows 10?
4 talaabooyin fudud inuu ka soo kabsado Messages tirtiray Facebook on iPhone / iPad / iPod taabashada
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Data in Mavericks (Mac OS X 10.9)
Siduu u MicroNet Data Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Pen Drive